Site web officiel de l'Eglise FPVM Ile-de-France Vatolampy Famonjena - Groupe Chorale
Chorale Hafatry ny Lanitra
Mitory ny Filazantsara amin’ny alalan’ny hira ; maneho ny fahatsaran’Ilay Andriamanitra be voninahitra ary mijoro ho vavolombelon’ny fitiavan’i Jesosy eto amin’izao tontolo izao. Izany no asa sy antom-pisian’ny Chorale « Hafatry ny Lanitra ».
Izahay mpikambana tao anatin’ity Antoko Mpihira ity dia samy nanana ny adim-piainana sy olana mafy nosedrainy avy saingy
noho ny herin’ny vavaka sy ny finoana nitaizana anay tato anatin’ny fiangonana FPVM Vatolampy Famonjena Boissy dia tsapanay ilay tana-maherin’Andriamanitra niasa teo amin’ny fiainanay ka nahatonga anay hivoaka ho mpandresy.
Noho izany indrindra no nanomezan’ny Tompo anay ny teny faneva hoe : « Hihira sy hankalaza ny herinao izahay » Salamo 13 : 31.
Ny Chorale « Hafatry ny Lanitra » dia sampana iray eto amin’ny FPVM Vatolampy Famonjena Boissy ary efa niorina niaraka tamin’ny fiangonana FPVM voalohany nisy teto Paris tamin’ny taona 2004 tany Aulnay sous-bois (département 93).
Betsaka ny mpikambana tao no efa nirahan’ny Tompo hanao asa samihafa manerana an’i Frantsa : tao ny lasa Mpitandrina ; Mpiandry sy Mpampianatra ; Mpitarika sy mpitaiza tanora…
Na aiza na aiza anefa misy azy ireny dia inoana fa HAFATRY NY LANITRA no entiny hahatonga ny olona rehetra handova ny fiainana mandrakizay, mba ho faly Jesosy Ilay nifidy azy.